ရိုးမရိပ်သာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာ Quarantine Center အခန်းအကူအညီလိုအပ် - Myanmar Builders Guide
မြန်မာနိုင်ငံလိုင်စင်ရကန်ထရိုက်တာများအသင်းချုပ်သည် Covid-19 ဒုတိယလှိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့်
ယခုအချိန်၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် (၃.၉.၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစတင်၍ ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်ရှိ ရိုးမရိပ်သာ တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာတွင် Quarantine Center နှင့် ယာယီဆေးရုံဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းများ၌
အသင်းချုပ် အသင်းဝင် ကုမ္ပဏီများဖြင့်(မြို့ပြ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး) လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။အဆိုပါလုပ်ငန်းများအား အသင်းချုပ်၏ CSR လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ရပ်အဖြစ် အသင်းချုပ် ရန်ပုံငွေမှ
ကျခံလှူဒါန်းလျက်ရှိပြီး Covid-19 ရောဂါကာကွယ်၊ ထိန်းချုပ်၊ ကုသရေး လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
ဆက်လက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းဆေးရုံကြီးများ အသီးသီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက်သော ဆရာဝန် များ နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ , COVID-19 ကုသစောင့်ရှောက်ကယ်ဆယ်မူလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ရာတွင် အိမ်မပြန်ဘဲ camp ကဲ့သို့နေထိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် MOHS ( ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာန ) မှ အခန်းများ လူ ၅၀၀ ယောက် နှင့်အထက် အတွက် အရေးတကြီးအမြန်လိုအပ်နေပါတယ်။
ကူညီပေးနိုင်သော ဟိုတယ်လုပ်ငန်းရှင် များ နှင့် အိမ် / Condo ပိုင်ရှင် များ . မနက်စာ/ နေ့လယ်စာ / ညစာ လျှုဒါန်းပေးနိုင်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ . မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ . လက်ဖက်ရည်ဆိုင် . စားသောက်ဆိုင်ပိုင်ရှင်များ နှင့် Food Delivery များအပါအဝင် sector ပေါင်းစုံမှ လုပ်ငန်းရှင်များ သည် အနည်းအများမဆို အောက်ပါအတိုင်း အမြန်ဆက်သွယ်ပေးပါရန် ( ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်အားနာစွာဖြင့် ) လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါတယ်။
ငွေလျှုဒါန်းလိုသူများအတွက်လဲ မကြာခင် သက်ဆိုင်ရာ Account No. & Bank ပေးပါမည် ခင်ဗျား
U Myint Zaw Sein Khe
KBZ Bank - 04030105700478502
AYA Bank - 0078224010002700
Myo Thwin Myo Thwin
CB Bank - 0010600500472832
Sai Kham Tun Ohn Morrice Sai
Wave Pay - 09799666550
ထို့နောက် ငွေလွှဲပို့ပြီးကြောင်းကို screen shot ပို့ပေးစေလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အခန်းများကူညီပေးနိုင်တဲ့သူလဲကူညီပေးပါရန် အခနှင့်ဆိုလျင်လဲ budget ကတော့ xx,xxx ကျပ်/ တခန်း ( including မနက်+နေ့လယ်+ညစာ box အပါအဝင် ) ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်။
အခန်းများကို (၃) လခန့် အထိ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။